Gabadh ree Ogadenia ah oo Gabaatiga ama Sooryadii Guurkeda ugu deeqday Agoonta Ogadenia. | ogaden24
Gabadh ree Ogadenia ah oo Gabaatiga ama Sooryadii Guurkeda ugu deeqday Agoonta Ogadenia.
Inkasta oo halganka Ogadenia ka socday mudada 32-da sano ah loo huray naf iyo maal badan oo si hagar la’aan ah ay u bixinayeen halgamayaal rag iyo dumar isugu jira hadana waxaa todobaadkan mar qudh ah soo if baxday arin ku cusub halganka dhexdiisa oo ay sameeyeen xubno u dhashay wadanka Ogadenia.
Xamdi Cabdulaahi Maxamuud waa muwaadinad u dhalatay wadanka Ogadenia kuna nool wadanka Holand ee qaarada Yurub waxayna ku dhaqaaqday talaabo kudayasho mudan oo aan horay loogu arag xubnaha halgamayaasha ah ee unasab sheegta Soomaalida Ogadenia.
Xamdi Cabdulaahi ayaa dhawaan meherkeedu kadhacay wadanka Maraykanka oo uu kunoolyahay lamaanaheeda ay is xusheen oo lagu magacaabo Cabdulaahi Laayaan waxayna Marwo Xamdi go’aansatay in ay gabaatigeeda ama sooryadeedii qaataan agoonta Soomaalida Ogadenia ee aabahood kuwaayay halganka kasocda Ogadenia.
Xamdi oo kaashanaysa aabaheed Cabdulaahi Maxamuud oo siwayn arintan ugu taageeray ayaa agoonta Soomaalida Ogadenia ee kusugan xeryaha Dhadhaab gaar ahaan Xagardheere usoo dirtay lacag gabaati ah oo dhan 500 oo Dooller (500$) waxaana lacagtaas looqaybiyay qaar kamid ah agoonta danyarta ah ee ree Ogadenia.
Hooyooyinka dhalay agoonta maanta laga farxiyay ayaa duco iyo hambalyo isugu daray qayska cusub ee Cabdulaahi iyo Xamdi iyo waalidkood oo uu ugu horeeyo aabo Cabdulaahi Maxamuud.
Bahda warfaafinta Soomaalida Ogadenia ayaa ugu horaynba hambalyo leh Xamdi iyo saygeeda waxayna bahda warfaafintu dhiiri galinaysaa in wadadan kudayashada mudan ay maraan dadbadan oo qurba joogta Ogadenia ah.